RC Baabuurta for Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 qoqobada 4WD Off Road Double dhinac qoqobada giringiratay - 2.4Ghz High Speed ​​Rock Crawler Vehicle la Gifts Children Dhalashada Laydhka RC Car for Kids - Jomo Technology Co., Ltd
RC Baabuurta for Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 qoqobada 4WD Off Road Double dhinac qoqobada giringiratay - 2.4Ghz High Speed ​​Rock Crawler Vehicle la Gifts Children Dhalashada Laydhka RC Car for Kids
Xawaaraha 1.High iyo wadada: gaariga waxay leedahay laba matoorrada xoog badan 4WD, loo hubiyo in ay xawaare sare. Aad giraangiraha dabacsan, waa ay fududahay in la sameeyo markooda deg deg ah.
Hadiyad 2.Best for kids: nidaamka hago radio 2.4GHz, baabuur RC waa dhalashadii kaamil ah, hadiyado Christmas ee carruurta.
3.All noocyada kala duwan ee tricks: cajiib ah 360 degree design flipping Xayaysiin, ku haboon caruurta ama baabuurta toy jeclaa aad. Dhinac Double socda, Weeraryahanka, dib bay, u leexo bidix, u leexo midig, 360 degree flipping giringiratay. Baabuur RC kaliya dhawraa on iyadoo aan loo eegayn waxa ay ku dhufatey socday ama sida ay u matalo, ku siin waayo-aragnimo kala duwan oo qabow!
Wax 4.High tayada: caag ah oo tayo sare leh, adag oo jirka baabuur waara, ruggedness dheeraad ah oo Amaanada. Taayirada The ka samaysan yihiin caag, fududahay in ay ka gudbaan xaalad kasta oo bannaanka.
5.Guarantee: gaariga isticmaalaa 3.7V 400mAh batari dabayn karo (ka mid ah) oo la cable USB (waxaa ka mid ah), 15 - 20 daqiiqo oo uu ku ciyaaro, 2 saacadood ka faaiidaysta waqtiga. KOOWHEEL bixiyaan celiyo buuxa ama is dhaafsadaan mid cusub oo si 30 maalmood gudahood. Ready in ay jawaab 24 hours.So dar gaadhigii hadda!
Previous: Control Remote RC Baabuurta 1:16 Miisaanka Road KOOWHEEL 2WD Off Baabuurta 2 dabayn Battery 2.4GHz Radio Remote Control bahal Truck Crawler Xawaaraha Sare USB xeedho RC Car ee dadka waaweyn iyo Kids (Blue)
2.4G hago CAR
2.4 GHz gacanta radio: xoog anti-faragelin, kaas oo awood u baabuur badan oo ay si wadajir ah inaan orotonno Waxaana waqti isku mid ah iyo meel. Haddii aad hesho 2 dheeraad ah gaari KOOWHEEL RC, waa ka xiiso badan in ay ka cararaan dhinaca baabuurta badan by dhinaca.
3 sababaha hoos ku qoran markii baabuur-wadidda-gaaban-of batteriga: Markii ugu amraya waa mid aad u gaaban si ay u taageeraan kulan.
6.4V dabayn / 700mAh batariga for x2 Car
waqti ka faaiidaysta: 180mins
nolosha Battery: oo ku saabsan 15mins
Car batari: 3.6V 600mA batari
Battery gacanta Remote: 2 * baytariyada AA 1.5V ( kuma jiraan)
Functions: leexo dhanka bidix, u leexo midig, hore, dib u
Cabirka Xidhmada: 16.1 x 11 x 3.9 inches
miisaanka Net: 1.1 pounds
Adeegga iyo damaanad:
12 bilood damaanad bedelka, noolaa, waayo, dayactirka.